कृष्ण कंडेलसँग मनमुटाव भएको भन्ने विषयमा टिका सानुले खोलिन यस्तो वास्तविक रहस्य - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
कृष्ण कंडेलसँग मनमुटाव भएको भन्ने विषयमा टिका सानुले खोलिन यस्तो वास्तविक रहस्य
लाइभ लोक दोहोरीका लागि चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका कलाकारहरुबीचको केही मनमुटाव भएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको छ । कार्यक्रमको एक भिडियोको एक अंश भाइरल पनि बनेको छ । कलकार र कार्यक्रमबीचको सम्बन्धबारे भिडियोमा टिका सानुले केही कुरा राखेकी छिन् । यस्तै कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कंडेल पनि टिका सानु लगायत कलाकारबारे आफ्नो केही धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यो पुरा भिडियोको एक अंश मात्र हो ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर टिका सानुले ‘सोझो रुपमा कार्यक्रमका बारेमा परिचित थिएन भन्दा घमण्ड कसरी हुन्छ? कुनै पनि संस्था र त्यसमाआवद्ध कर्मचारीहरु एकअर्कामा परिपुरक हुन्छन भन्दा के बिराए? मैले इन्द्रेणीको कार्यक्रमका क्रममा शहरदेखि गाउँवस्तिका भिरपाखा धाएकी छु। २०औं जोर जुत्ता चप्पल फटाएकी छु। केही पाएकी छु, केही गुमाएकी छु। जुन प्रक्रिया चलिरहने प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया टिकाले दएकी छिन् ।
टिकाले कृष्णप्रसाद कँडेल इलाममा भएको र उहाँ काठमाडौँ आउनासाथ यो विषयमा थप प्रष्ट पार्ने बताएकी छिन्। साथै पूराना भिडियो काटेर पोस्ट गरेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने, तनाव दिने, जातिय रंग दलेर गालि गर्नेहरुलाई मेरो भन्नु केही छैन। सत्य बुझ्नलाई सचेतना चाहिने कुरा पनि उनले सामाजिक सञ्जालमा लखेकी छिन् । टिकाले कृष्ण र आफूबीचमा कुनै मतान्तर र मन मुटाव नभएको पनि जनाएकी छिन् ।
उनले फेसबुकमा यस्तो लेखेकी छिन्
उक्त भिडियोमा मैले बोलेका केही राम्रा कुराहरु थिए। बिडम्बना ति कुराहरु सबै आएको पाएको छैन। जुन कुरा भाइरल भएका छन्, ति कुराहरु प्रचार गर्न लायक छैनन्। तर, त्यो भिडियोमा सोझो रुपमा कार्यक्रमका बारेमा परिचित थिएन भन्दा घमण्ड कसरी हुन्छ? कुनै पनि संस्था र त्यसमाआवद्ध कर्मचारीहरु एकअर्कामा परिपुरक हुन्छन भन्दा के बिराए? मैले इन्द्रेणीको कार्यक्रमका क्रममा शहरदेखि गाउँवस्तिका भिरपाखा धाएकी छु। २०औं जोर जुत्ता चप्पल फटाएकी छु। केही पाएकी छु, केही गुमाएकी छु। जुन प्रक्रिया चलिरहने प्रक्रिया पनि हो।
मलाई आजको दिनसम्म ल्याउनुमा इन्द्रेणी कार्यक्रमले कुनै योगदान दिएको छैन भनेर कही भनेकी छु र ? कलाकार र संस्थाबीचको संम्बन्ध परिपुरक हुन्छ भन्नु गलत हो ? खैर इन्द्रेणी कार्यक्रमका सन्चालक आदरणीय दाजु कृष्णप्रसाद कँडेल ज्यु यतिखेर पुर्व इलाममा हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ आउनासाथ यो विषयमा थप प्रष्ट पार्नेछौं। साथै अर्को कुरा पूराना भिडियो काटेर पोस्ट गरेर मेरो चरित्र ह,’ त्या गर्ने, तनाव दिने, जातिय रंग दलेर गालि गर्नेहरुलाई मेरो भन्नु केही छैन। सत्य बुझ्नलाई सचेतना चाहिन्छ। नोट: कृष्ण दाइ र मेरोबीचमा कुनै मतान्तर र मन मुटाव छैन।